समाचार | Indrenionline.com
इन्द्रेणी संवाददाता दाङ, ४ मंसिर । सरकारले आफ्ना कार्यकर्तामाथि दमन गर्दै गिरफतार गरेको भन्दै उनीहरुलाई विनासर्त रिहाईको माग गर्दै विप्लव माओवादीले यही मंसिर ६ गते दाङ बन्दको आह्वान गरेको छ । नेपाल कम्युष्टि पार्टीका दाङ जिल्ला सेक्रेटरी सविन पोख्रेलले आज सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बन्दको आह्वान गरेका छन् । विज्ञप्तिमा प्रहरी प्रशासनले आफ्ना कार्यकर्ताहरुको घरमा गुण्डागद्री शैलीमा छापामार्ने, कार्यकर्तामाथि ...
इन्द्रेणी संवाददाता काठमाडौं, ४ मंसिर । आफ्नो एकमात्र छोरा प्रकाश दाहालको आकस्मिकरुपमा असामयिक निधन भएपछी प्रचण्ड पहिलोपटक सार्वजनिकरुपमा आफन्त तथा शुभचिन्तकहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिएका छन् । २/३ बर्षको अन्तरालमा अकल्पनीय रुपमा आफ्ना छोरी र छोरा गुमाउनु परेको पीडा लाई आफुले सम्हाल्न प्रयास गरेपनि आफ्नी पत्नी सिता दाहाललाई भने सम्हाल्न धौ धौ परेको प्रतिक्रिया दाहालको छ । हेर्नुहोस भिडियो :
काठमाडौँ, ४ मंसिर। आइतबार बिहान निधन भएका प्रकाश दाहालको पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ । साँझ ५ बजे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रकाशका पिता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनको पार्थिव शरीरमा दागबत्ति दिए । हजारौं शुभचिन्तकहरुको उपस्थिति रहेको पशुपति आर्यघाटमा शोकाकुल प्रचण्डलाई भेटन् र प्रकाश दाहालको अन्तिम बिदाईका लागि सकारका मन्त्रीहरु तथा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थित भएका थिए ...
इन्द्रेणी संवाददाता काठमाडौं, ३ मंसिर । नेकपा एमालेले माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’का छोरा प्रकाश दाहालको असामयिक निधनबाट नेकपा एमालेले देशभरी चुनावी प्रसारप्रचार कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । प्रकाशको निधनले पार्टीस्तब्ध भएको भन्दै आज आइतबार एक घण्टा देशभरका चुनावी कार्यक्रम स्थगित गरेको हो । यसैगरी प्रचण्डले उम्मेदवारी दिएको चितवन क्षेत्र नं. ३ मा पनि चुनावी कार्यक्रम स्थगित भएको छ । वाम गठबन्धनले ...
इन्द्रेणी संवाददाता काठमाडौ ३ मंसिर । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डका एक्ला पुत्र प्रकाशको निर्भीक अस्पतालमा उपचारको क्रममा भएको दु:खद निधन सुने लगतै चुनावी अभियानमा झापा पुगेका प्रचण्ड हेलिकप्टरबाट काठमाडौ फर्किएका छन । । काठमाडौ फर्के लगतै आफ्नो निजी निवास लाजिम्पाट पुगेर प्रकाशको मृत्युको कारण बारे परिवार श्रोत संग संक्षिप्त जानकारी लिदै प्रचण्ड सिदै नर्भिक अस्पताल ...
इन्द्रेणी संवाददाता काठमाडौं, ३ मंसिर । हृदयघातका कारण निधन भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का छोरा प्रकाश दाहालको शव श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा राखिने भएको छ । १ वजेपछि मात्रै पेरिसडाँडामा शव राखिने बताइएको छ । अहिले प्रकशको शव नर्भिक अस्पतालमै रहेको छ भने त्यहाँ आफ्नो छोराको निधनबारे वुझना प्रचण्ड र श्रीमती सीता दाहाल पुगिसकेका छन् ...
चुनाव सुरक्षामा सरकारको लापरवाही
मंसिर । कात्तिक २४ मा निवर्तमान गृहमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मामाथि रुकुममा बम आक्रमण भएकै दिन निर्वाचन आयोगमा सुरक्षा अधिकारीको बैठक बसेको थियो। चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लवु समूहबाट सानोतिनो हिंसा मच्चाउन सक्ने भए पनि सुरक्षा दृष्टिले ‘ढुक्क हुनु आयोगलाई आश्वस्त बनाएका थिए। तर, त्यसयता निर्वाचन हिंसा घट्नुको साटो उम्मेदवार लक्षित आक्रमणका शृंखलाबद्ध घटनाले भयको वातावरण ...
यही घरमा थियो दाङमा युद्धकालीन हेडक्वाटर
पाण्डव शर्मा घोराही । मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने गरी भएको १० वर्षे जनयुद्ध नेपाली समाजको एउटा ऐतिहासिक परिघटना हो । जनयुद्धमा कैयौं मान्छेहरु सहभागी भए । त्यहि युद्धकको क्रममा कैयौंको ज्यान पनि गयो । युद्ध भनेपछि युद्धका नेतृत्वकर्ताहरुको सुरक्षा एउटा प्रमुख चुनौती पनि हो । त्यतिबेला राज्य पक्षका सत्ता सञ्चालकहरु कहाँ बस्छन् रु उनीहरु के खान्छन् रु र कस्ता छन् ...
बेपत्ता परिवारमाझ उम्मेदवार शर्मा
दिपक बोहरा पहरुवा । बामगठबन्धनको तर्फबाट दाङ क्षेत्र नंं. ३ को प्रदेशसभा १ का उम्मेदवार जगप्रशाद शर्मा ‘अपार’ तुलसीपुर १५ पहरुवाका बेपता परिवारको घरमा पुगे । १० बर्षे जनयुद्धका क्रममा बेपता पारिएका ६ परिवारको घरमा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका अपार त्यहाँ पुग्दा बेपता परिवार निकै खुसी देखिन्थे । माओवादी केन्द्रका ईमान्दार, नरम स्वभाबका नेताको रुपमा परिचय बनाएका अपार प्रति ...
पाण्डव शर्मा दाङ क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार कृष्णबहादुर महरा र प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार शंकर पोख्रेललाई घोराहीका मुश्लिम समुदायले स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले एक कार्यक्रम गरी स्वागत गरेका हुन् । स्वागत समारोहलाई सम्वोधन गर्दै महराले आफूहरुले बिगतदेखि नै अल्पसंख्यकको आवाज बुलन्द गर्ने गरेको बताउनुभयो । ‘सबै धर्म र समुदायलाई सम्मानपर्छ, हामी यसमा धेरै अगाडि छौं’– उहाँले ...